“ABO”n , MAQAA MITII !!! KAAYYOO UMMTA OROMOOTI !!! – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
On December 23, 2016 By OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORGIn oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org
ABO”n , MAQAA MITII !!!
KAAYYOO UMMTA OROMOOTI !!!
SEENAA Y. G(2005) kutaa 2ffaa.
Barruu kiyya kutaa 1ffaa yaada itti aanuu kaa’ee har’af bulfadheen adda baane. Akkas jedha. Wayyaaneen sochii qabsoo Oromoo fudhatama dhabsiisuuf, Faranjootaaf haala itti aanuun gaaftee turte. Dhimma Ummatichaa fi qabsoo isaa bara baraaf karaa itti cufuuf:,
ABOn namoota muraasa malee, kan Ummata Oromoo bakka bu’uu miti. kaayyoon isaas, kan ummataa miti. kan namoota muraasaati.
ABOtti Biyya Bulchuu itti laachuun waan deemaniif milkeessuudhaa.
Guyyaa tokkotti Biyya kirstaanaa kana diigu. Isaan islaamatti heddummaatu.
Walii isaanii wal fixan. Wal hin ta’an .
Biyya Diiguu. Guutummaatti saboota Biyyatti fixu ykn ni godaansiisu. Jettee fudhatama argachuu yaalteetti. Egaa jaallatamuus jibbamuus shira wayyaanee kana cabsuuf hojjachuun waan murteessaadha. Dhimma isaaniti ykn maal fiddii ? jedhanii bira hin taran. Egaa qabxiin kiyya, adeemsa wayyaanee kanaaf humna ta’aa ka jiru eenyu ? eenyutu dhugeessaafii jira ? kan jedhu irratti keessa keenya keessatti waan mudatee waa laman wal bira qabuu barbaade .
QEERROO FI UMMATA OROMOO:
Adeemsi qabsoo gama kanaan biyya keessatti gaggeeffamaa jiru, injifannoo guddaa galmeesisuu addunyaatu irraa dubbataa jira. Warri yaada adda addaa qabaatanii dantaa isaanii keessaa dhaban ammoo , sochiin Biyya keessaa abbaa hin qabuu jedhu. Garuu qabsoon Biyya keessaa abbaa qabaachuu isaa qabxiilee tarrisanii kaa’uutu danda’ama. Qabxiileen kun heddduudha. Inni hangafaa garuu, ABOn nu haa bulchu jedhanii wayyaanetti dubbachuuisaaniitii. Gootummaan ijoollee kanaa maqaa wal saamsiisuu irra taree waan isaan akeeku qaba ture. garuu hin taanee. Xurree qabsoo kanneen saaqanii karaa irraa maqan, maqaa kanaan Ummata biratti futama argachuuf badadaa jiru. kana jechuun maqaa kanaan ummata kana qabuuf yaaluu jechuudha. Kanarraa kan hafee wayyaaneen ABO biraa dhaabuuf waggaa 25ffaaf itti fufu mirkaneessu jechuudhaa.Garuu mata duree koo waliin akka deemuuf amma tokko qofaan itti fayyadama.
A,1= Sochiin qeerroo qabsoo Oromoo dhageetti itti horuu irra dabree, holollii fi tuffiin wayyaanee jalqaba irra tarrifnee soba akka ta’ee faranjootaaf mirkaneessanii jiran. Sochiin kun naamuusaa fi sagantaa mataa isaatiin kan masakamee fi tu’annaa diinaa jala ooluu kan dide, sochiin isaa eessaa akka ta’ee wallaalamee diinaaf mataa dhukkubbii kaa ta’eedha. Hunda irra qophii fi naamuusa tu’annaa qabuun gaggeeffamuu isaa kanneen mirkaneessan keessaa, Ijoolleen kun hanga har’aatti kaayyoo barbaadamuufiin ala deemanii badii geesisan hin qaban. Mootummaa irraa kan hafe Ilmaan Tigiraayii fi saboota irratti waan gadhan tokkollee hin qaban. Obbolaan isaa yennaa wareegaman , abbaa fi haatii gorra’amtee yennaa darbatamtuu ilaalanii miiraan badii hin hojjannee. Gubaa keessa isaanii qabatanii kaayyoof dursa kennanii lammii isaanii awwaallatan . lammii isaanillee yoo ta’ee badii isaaf akeekkachiisa quubsaan alatti, fira itti baasanii kadhatanii dinnaan adabbii itti laatan. Dubbiin bubbulee waa biraa akka hin kaafneef. Saamichaa fi jibba ummatootaa hanga har’aatti waan mul’isan hin qaban.hojii baayyee nama qoru kana keessa Gandummaa Diyaaspooraa unkuru tokkollee isaan keessatti hin mul’annee. wayyaaneen gabaasaa shiraan guutamee qofaa osoo hin taanee, wayyaaneen Ummati dhibbeentaa 99n na fialatee isa jettee guyyaa saafaa mirkaneessanii qalbii faranjii cabsanii ajandaa taasifatan. Gaaffiin walabummaa , akka wayyaane jettu kan ABO keessaa Namoota muraasaa osoo hin taanee, kan UMMATA OROMOO ta’uu ifatti mirkaneessan . Waan ani kaasee kun muraasa. Kanneen kun walitti qabamanii maalummaa sochii kanaa ifatti nu mirkaneessu. Keessattuu sagantaadhaan Oromiyaa guutuu keessatti sochiileen gaggeeffaman wayyaanee maraachisuu isaanii labsii yeroo hatattamaa irraa barachuu dandeenya. Wayyaaneen Ilmaan Oromoo kumoota 50n hiituus, kan hafee qabsoo itti fufee jira. Kun wayyaanee rifaasiseera. Kan sochii kana gaggeessuu keessaa calallee hidhaa keessatti hanbifanaa jettee kan yaaddee fashalsee, har’a ka hidhan deebisanii akka hiikan taasiseera. Kun hundi qeerroon hangam naamuusaan kan guutamee fi abbaa gaarii akka qabaan nu mirkaneessa. Dhiigaan kabajaa Ummata isaanitti horanii holola wayyaanee fashalsanii hubadhaa.
“ABO QC”,,, ATILAANTAA …….AKITIVISTOOTA …KKF
Dalagaan gama kanaan gaggeeffamaa jiru gabaabaatti shira wayyaanee kan dhugeessuu fi salphina ummata kana akka labsuutti fudhatama. Abbaan fedhee itti amanee fi ummata biratti fudhatama argannaan gama barbaadeen qabsaa’uun mirga. Garuu adeemsa waggaa lamaa fi shani wallaalanii wal balleessuuf qofaa sochiin taasifamuu , wayyaaneef umurii ta’ee kunoo waggaa 15 lakkofsiisee jira.waggaa 15 kana beektoota keenyas, hundeessitoota qabsoo warra ofiin jedhaniis, akitivistoota keenyas, maanguddaa keenyas akka dansaatti dhageenyee daawwannee jirra. Waanuma ajaa’iibaa ummata ajaa’iibaa jennee akka bira tarru nu taasisee jira. Qabsoon Oromoo kana keessa dabruun dirqama . waa irraa barannaa jennee gammachuumaan ilaalaa turre. Waan jiru wal sukkuumee fi wal simachaa deemee gama tokkotti ba’uu malaa tilmaama jedhu irraa. Garuu har’aa wanni ija keenyaan argaa jirru, wal fonqolchuu habshoota irratti jibbinuu ifatti argaa jirra. ABO isa dhugaa yennaa qeeqan, magaalaa taa’aanii qabsoo akkamiin gaggeessuu jedhu. Har’aammoo Atilaataa fi Kaayiroon ykn Jarman Bosona Oromiyaatti fudhatanii qeeqa isaanii kaleessaa dagatanii waan wayyaaneen farnjootaan jette dhugeessaa jiru. beektoota keenya , hundeessitoota jennee kabajaa Ummati keenya irraa mulquu dhiisee, badii isaanii baadhatee isa kaleessaaf galata galchuuf murteeffatee wayita jirutti, saamichaa fi dhaaba deeggaraa Oromoo guutuu qabu dhiisanii, Nama shaniif ibsaa fi baga nagaan asi baate waliin jechuun adeemsa wayyaanee fashalsuuf hin fakkaatu.
Seenaan yoomillee seenaadha.karaa gaariis, karaa badaas kan hojjatamuu seenaama ta’aa. Miidhaa lammii ofii irratti kan hojjatamu garuu seenaa qofa ta’ee hin taa’uu . deebii qabaachuu danda’aa. Walumaa galatti bara miilli mataa hooqee irra jirra. Dargaggoonni naamuusaa fi sagantaan masakamanii seenaa galmeesisaa jiru. guddaan keenya ammoo Maqaa wal saamee Ummata hamilee buusaa jira. Qabsoo kana cichee kan qabee jiru, cichoomiina isaan addunyaa hawwachaa jira. ABOn inni ganamaa wareegama ulfaataan dhaloota hiriirsee itti fufeera. Shirri diinaa bifa hedduus itti fufeera. Diinni qabsaa’oota Oromoo fi dhaaba Ummatichaa diiguun , dhabamsiisuun kaayyoo isaaniitii. Ilmaan Oromoof garuu gochi kun gonkumaa kaayyoo hin taatu. Garuu ammoo ijaan argaa jirra.QC marsaa 1ffaa xumuramee , QC marsaa 2ffaa irra geenyee jirra. Hojiin garuu…….QC FI ATILAANTAAN akkasumas, Akitivistoonni ammoo waliitti dhufanii maal hojjatu laata ? mee inuma eegganna.
UMURII SOCHII BIYYA KEESSAA FI DIYAASPOORAA :-
Inni diina jala jiru lubbuu isaa takkittii mirga abbaa Biyyuummaaf kennee qabsoo walirraa hin cinnee gaggeessaa jira. Kanaaf ragaa tarrisuun hin barbaachisu. Biyya keessaa sochii ABO fi QEERROOtu jira. Jalqabas, ammas , gara fuula duraattis. Kun bubbulee dhugooma. Warri umurii itti horan ammoo warra sagantaa fi galii of harkaa qabuudhaa.
Isa Diyaaspooraa mee qalbifadhaa. Waan meeqatu ka’ee baatii osoo hin guunnee bada ykn dhaama. Karoora baatii tokkollee dhabanii akka ilmaan masaanuu wal diigaa oolani bulan.bara 2000 kaasee waan meeqa ijaaramee deebi’ee diigameera. Dhaabi meeqa dhaabbatee lafa ka’eetti deebi’eera. Gurmuun meeqa , gandi meeqa ijaaramee deebi’ee ofiin diigameera. Meeqa akka girriisaa wal faana girrisee wal jalaa badeera. Namni tokko bakka kudhanitti kakateera. Akitivistoota arraba malee hegaree hin tilmaamnee meeqa argine taajjabnee. Ijoollee lafaa kaatee kiraabaata hidhattee isa qalbii fi hubannoo meeqa qaban dhiisanii xiinxaltoota jedhaman ? kanneen keessaa garuu hanga har’aatti sagantaa fi karoota waggaa 6, 7, 10 kkf baasee qabsoo kanaaf ka gumaache hin agarree. Hundumtuu Dokitarummaa fi Piroofeesarummaa barnoota adda addaan wal barbaada. Qabsoon ammoo akkas miti . ogummaa mataa isaa qaba.waan meeqa agarree. Dhumarratti abdiin ummataa alaa miti. Biyya keessa ta’ee wal jabeessaa jiran. Warri Biyy alaa irraa abdii dhaban qabsoo biyya keessatti bifa haaraan ijaaranii waan addunyaan taajjabu raawwachaa jira. Inni kaan isa ijaan argurra, maa anaan hin gaafannee ? jedhee wareegama ijoollee keenya irratti qoosuu barbaada. Ajaa’iiba. kanneenis wayyaaneen ka farnjootaaf gabaasan dhugeessan .
FALFALTUU INTARNEETA IRRAA :
Falfaltoonni fi xuriin seenaa Intarneeta irraa hedduudha. Kanneen keessaa waanuma jiru irraa quuqamanii yaada mormiis ta’ee deeggarsa kennan ni jiru. kanneen wayyaanee irraa ergamnii hojii diiggaa gaggeessanis ni jiru. warri of tuulummaan machaa’anis ni jiru. warri ofittummaan maraatanis ni jiru. warri dhaamsa biyya keessaa jedhanii dhaaboota irratti holola oofanis ni jiru.namoota dhuunfaa wal dhabanii kaayyoo Ilmaan oromoo kumaatamaan itti dhuman dhareessu kan barbaadanis guutan. Hedduu nama ajaa’iiba. Waa’ee isaaniif yeroo gubuun hin maltu. Garuu ummati of irraa dhaabuuf isaan adamsuun gaariidha. Kanas hojiimatu hiikkaa kennaaf. Garuu badii wayyaanee suduudaan kanneen guutaa jiran ta’u beekuun barbaachisaadhaa. Umurii isaanii guutuu achumarra jiru. garuu furmaata hin fidan. Nama abaaruu fi qeequu qofaan warra afaan hiikkatan fakkaatu. Kkkkk Qabxiilee kanneen irraa hubannoo ni argattu jedheen abdadha. OROMOOn ammatti maal barbaada?? ?
KUTAA XUMURAA irratti walitti deebina. GALATOOMAA !